CAJIIB: Lionel Messi v Wu Lei Derby! Dalka China Oo Daawashadii Abid Ugu Badnayd Ee Kubbada Cagta Laga Filayo, Mucjisada Wu Lei Oo 14 Jeer Messi Kaga Saamayn Badan Iyo Xusuustii Sawarkii 2008. - Gool24.Net
CAJIIB: Lionel Messi v Wu Lei Derby! Dalka China Oo Daawashadii Abid Ugu Badnayd Ee Kubbada Cagta Laga Filayo, Mucjisada Wu Lei Oo 14 Jeer Messi Kaga Saamayn Badan Iyo Xusuustii Sawarkii 2008.
March 30, 2019 Mahamoud Batalaale
Way adag tahay in lays barbar dhigi karo Lionel Messi iyo Wu Lei oo ah wiilka ay indhaha ku kala furtaan malaayiinta dalka China laakiin waxay caawa iskaga hor iman doonaan kulanka Catalan Derby iyada oo waliba la filayo in uu noqon doono kulankii abid ugu daawashada badnaa dalka China.
Wu Lei ayaa waqti badan la soo barbar dhigayay Lionel Messi kadib markii uu waxyaabo waali ah ka soo sameeyay qaarada Asia iyo horyaalka dalkiisa China ee Chenese Super League waxaana jirta xog uu maamulka horyaalka La Liga diwaan galiyay oo layaab kugu ridi karta.
Wu Lei ayaa shan jeer ku soo guulaystay kabta dahabka ah ee gool dhalinta Chinese Super League laakiin markii uu u soo wareegay horyaalka Spain waxa uu sabab u noqday in malaayiin reer China ahi ay ku soo biireen daawashada horyaalka La Liga.
Xog uu diwaan galiyay maamulka horyaalka La Liga ayaa lagu shaaciyay in 40 milyan qof oo reer China ahi ay daawadeen kulakii ugu horeeyay ee uu Wu Lei u saftay kooxdiisa Espanyol kaas oo ahaa kulankii Villarreal kaga hor yimid La liga laakiin waxa uu ciyaaray 12 daqiiqo oo kaliya.
Wu Lei oo ah xidiga taariikhda abid ee horyaalka China ugu goolasha badan isla markaana ka soo dhaliyay 102 gool ayaa dadka China waxa uu uga xamaasad badan yahay sida ay jamaahiirta kubbada cagta aduunka ugu xamaasad badan tahay daawashada kulanka El Calsico.
Xog uu shaaciyay maamulka La Liga ayaa lagu sheegay in goolkii ugu horeeyay ee uu Wu Lei ka dhaliyay horyaalka La Liga ee kulankii Real Valladolid uu dalka China kaga saamayn batay in ka badan 14 jeer mid ka mid ah goolashii Lionel Messi.
Wu lei waxa uu si khaas ah u jecel yahay Barcelona iyo Lionel Messi laakiin caawa waxa uu ku noqon doonaa cadawga ugu wayn wuxuuna sanadkii 2008 kii ahaa carruurtii kubbadaha soo qaybanayay intii lagu jiray ciyaarihii Olimbikada ee 2008 Beijing Olympics markaas oo uu sawir taariikhi ah la galay Lionel Messi iyo Sergio Aguero intii ay xulkooda Argentina ay artamadan ku matalayeen.
Markii ugu horaysay jamaahiirta malaayiinta ah ee reer China ayaa helay fursad ay ku daawan karaan wiilkooda dahaniga ah ee Wu Lei oo ka hor imanaya xidiga waqtiga badan la soo barbar dhigayay isla markaana uu la kulankiisa jecel yahay ee Lionel Messi.
Lionel Messi ayaa taageero waali ah ku leh dalka China laakiin sida la cadeeyay Wu Lei ayaa hadda kaga dalkiisa China kaga saamayn batay Messi waxayna ciyaarta Barcelona iyo Espanyol dalka China u bilaami doontaa 11:15 habeenimo taas oo noqon doonta waqti taariikhda lagu qori doono iyada oo la filayo in daawashadii abid ugu badnayd laga diwaan galin doono ee kubbada cagta dalka China.
Bishii January ee la soo dhaafay, kooxda Espanyol ayaa la soo wareegtay Wu Lei wuxuuna soo saftay 7 kulan laakiin waxa uu kooxda Espanyol ka caawiyay in ay si waali ah sare ugaga soo kaceen baraha bulshada isla markaana ay taageero aan hore loo arag ka heleen China.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa waxa uu Wu Lei kala kulmi doono in markii ugu horaysay uu garoon la soo gali doono xidiga uu magiciisa waqtiga badan ku soo sitay Asia ee Lionel Messi.